(မြန်မာဘာသာ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မြန်မာဘာသာစကားသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရုံးသုံး ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ဗမာလူမျိုးနှင့် ဗမာနွယ်ဝင်(ရခိုင်၊ ဓနု၊ အင်းသား၊ တောင်ရိုးနှင့် ယော)တို့၏ ဇာတိစကားဖြစ်သည်။ ဗမာလူမျိုးတို့သည် တိဘက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ (Tibeto-Burman Languages) ပြောဆိုသည့် လူမျိုးနွယ်စုကြီးမှ အကြီးဆုံးသော လူမျိုးဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ၃၂သန်းခန့်သည် မြန်မာဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာစကား အနေဖြင့် သုံး၍ မြန်မာတိုင်းရင်သားများသည် ဒုတိယဘာသာစကား အနေဖြင့် သုံးသည်။
မြန်မာဘာသာစကားသည် တိဘက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ(Tibeto-Burman Languages) အုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ တိဘက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ အုပ်စုသည် တရုတ်-တိဗက်နွယ် ဘာသာစကားများ မိသားစု (Sino-Tibetan Languages Family) ထဲတွင် ပါသည်။ မြန်မာဘာသာသည် တက်ကျသံရှိသော(tonal)၊နိမ့်မြင့်အမှတ်အသားရှိ(pitch-register)ဖြစ်သော၊ ဧကဝဏ္ဏစကားလုံး(monosyllabic) အလွန်များသော ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ ကတ္တား-ကံ-တြိယာ စကားလုံးအစီအစဉ်ဖြင့် ရေးသော သရုပ်ခွဲဘာသာစကား(analytic language) လည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာအက္ခရာများသည် ဗြာဟ္မီအက္ခရာ သို့မဟုတ် ဗြာဟ္မီအက္ခရာမှ ဆက်ခံထားသောမွန်အက္ခရာတို့မှ ဆင်းသက်လာသည်။
မြန်မာဘာသာစကားသည် တရုတ်-တိဗက်နွယ် ဘာသာစကား မိသားစု ၏ ဗမာနွယ်ဘာသာစကားများ(Burmish languages)မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တရုတ်-တိဗက်နွယ် ဘာသာစကားများထဲတွင် တရုတ်နွယ် ဘာသာစကား(Sinitic) မဟုတ်သည့် ဘာသာစကားများတွင် သုံးစွဲသူ အများဆုံး ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ တရုတ်-တိဗက်နွယ် ဘာသာစကားများထဲ၌ မြန်မာဘာသာစကားသည် စာပေအရေးအသားစနစ် ပေါ်ထွန်းခဲ့ရာတွင် တရုတ်စာ၊ ပျူစာ၊ တိဗက်စာနှင့် တောင်ဂွတ်စာ တို့နောက် ပဉ္စမမြောက် ဖြစ်သည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး - ဘိတ်စကား၊ ထားဝယ်စကား၊ ပလောစကား
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး - ယောစကား
ရှမ်းပြည်နယ် - အင်းသားစကား၊ တောင်ရိုးစကား၊ ဓနုစကား
ရန်ကုန်-မန္တလေး တို့တွင် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ပြောဆိုကြသော စံပြု မြန်မာစကားသည် ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းတွင် သုံးသော စကားများပင် ဖြစ်သည်။ အထက်မြန်မာပြည်နှင့် အောက်မြန်မာပြည်ကြားအဓိက စကားကွာခြားမှုမှာ အသံထွက်ကွာခြားခြင်း မဟုတ်ဘဲ စကားလုံးရွေးချယ်မှု ကွာခြားခြင်းဖြစ်သည်။ ဧရာတီမြစ်ဝှမ်းအတွင်း အသံထွက် ကွာခြားမှု အနည်းငယ် ရှိပါသည်။ ဥပမာ ရဟန်းသံဃာများကို ကပ်လှူသည့် ဆွမ်းကို အထက်မြန်မာပြည်က ဆွမ်း[sʰwáɴ] ဟု စာလုံးပေါင်းအတိုင်း အသံထွက်သော်လည်း အောက်မြန်မာပြည်တွင် ဆွန်း[sʰʊ́ɴ]ဟု အသံထွက်ပါသည်။ မန္တလေးတွင် ကျား၊ မ မရွေး မိမိကိုယ်ကို ‘ကျွန်တော်’ဟု ညွှန်းဆို ပြောကြားလေ့ရှိသည်။ ရန်ကုန်တွင်မူ ‘ကျွန်တော်’ကို အမျိုးသားများသာ သုံးကြပြီး အမျိုးသမီးများက ‘ကျွန်မ’ဟု သုံးနှုန်းသည်။ အထက်မြန်မာပြည်တွင် မိခင်နှင့် ဖခင်ဘက်မှ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို ခွဲခြား ခေါ်ဝေါ်နေဆဲ ရှိပြီး အောက်မြန်မာပြည်တွင်မူ သိသိသာသာ ခွဲခြား ထားခြင်း မရှိပေ။ ဥပမာ အထက်မြန်မာပြည်တွင် ဖခင်၏ အမနှင့် ညီမအား အရီးကြီးနှင့် အရီးလေးဟု လည်းကောင်း၊ မိခင်၏ အမနှင့် ညီမအား ဒေါ်ကြီးနှင့် ဒေါ်လေးဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ အောက်မြန်မာပြည်တွင် ဒေါ်ကြီးနှင့် ဒေါ်လေးဟုသာ ခေါ်ဝေါ်သည်။
ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးကို သိမ်းပိုက်ပြီး ငါးနှစ်အကြာတွင် တစ်ပြည်လုံး ကောက်ယူခဲ့သော သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကုန်းဘောင်မင်းဆက် နယ်မြေအတွင်း အမျိုးသားများ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းများ ထူးခြားစွာ မြင့်မားနေပြီး ၆၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိသည်။ စာတတ်မြောက်မှု မရှိသေးသော လူနည်းစုလူမျိုးများရှိရာ တောင်ပေါ်ဒေသအချို့ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်း မပြုလျှင် ထိုကိန်းဂဏန်းထက် ပိုမိုများမည်ဖြစ်ရာ ထိုခေတ်အခါအနေဖြင့် အလွန်မြင့်မားသော နှုန်းထားဖြစ်သည်။ ဗမာမျိုးနွယ် ဗမာစကားပြောသူများ အောက်မြန်မာပြည်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်မှာ များစွာ မကြာသေးပါ။ ၁၈ ရာစု အလယ်ပိုင်းအထိ အောက်မြန်မာပြည်တွင် မွန်လူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး မွန်ဘာသာစကားက လွှမ်းမိုးထားသည်။ ၁၇၅၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာစကားပြောသည့် ကုန်ဘောင်မင်းဆက်က မွန်စကားပြောသည့် ဟံသာဝတီပြည်ကို အနိုင်ရရှိပြီးနောက် စတင်၍ အောက်မြန်မာပြည်တွင် ဗမာစကားကို ပြောင်းလဲ သုံးစွဲလာကြသည်။ ၁၈၃၀ ခုနှစ်ရောက်သော အခါ ၎င်းဒေသတွင် နေထိုင်သူများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗမာ ဟု သတ်မှတ်ပြောဆိုကြသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အထက်မြန်မာပြည်မှ ဗမာများ ပြောင်း ရွေ့လာခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ ကူးပြောင်းခြင်း၊ အပြန်အလှန်သွေးနှောခြင်းများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်တွင် ဆန်ထုတ်လုပ်မှု အရှိန်မြှင့်လာခြင်း၊ အထက်မြန်မာပြည်တွင် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု မရှိခြင်းများကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းမှုမှာ ပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။
ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းနှင့် ပိုမိုဝေးကွာလေ ဒေသိယစကားများသည် စံပြုမြန်မာဘာသာစကားနှင့် ပိုမိုဝေးကွာလေဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ ယောစကား၊ ပလောစကား၊ ဘိတ်စကား၊ ထားဝယ်နှင့် အင်းသားစကားတို့ ဖြစ်သည်။ စကားအသုံးအနှုန်းနှင့် အသံထွက်ပုံတို့ များစွာ ကွဲပြားသော်လည်း ဒေသိယစကားများသည် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အပြန်အလှန်လေ့လာနားလည်နိုင်စွမ်း ရှိကြသည်။ အထူးသဖြင့် တနင်္သာရီ ဒေသရှိ စကားများသည် စံပြုမြန်မာစကားနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ ရှေးဆန်သည်။ ရှေးဟောင်း မြန်မာစကားတွင်သာ တွေ့ရသော(လဆွဲ - ဥပမာ -အ္လ ) သံသည် စံပြုမြန်မာစကားတွင် မရှိတော့သော်လည်း ထားဝယ်စကားနှင့် အင်းသားစကားများတွင် ကျန်ရှိနေသေးသည်။ ဘိတ်စကားပြောသူများမှာ ၂၅၀၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး ထားဝယ်စကား ပြောသူများမှာ ၄၀၀၀၀၀ ခန့် ရှိသည်။
ရခိုင်စကားတွင် အထင်ရှားဆုံးမှာ ရှေးမြန်မာစကားမှ မပြောင်းလဲပဲ ကျန်ရှိနေသော 'ရ' သံ [ɹ]ဖြစ်သည်။ ၎င်းအသံသည် ခေတ်ပေါ် စံပြုမြန်မာစကားတွင် 'ယ' သံ [j] အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီ ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုမှာ 'ဧ' သရသံနှင့် 'ဣ' သရသံတို့ ပေါင်းစပ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စံပြုမြန်မာစကားတွင် 'ခွေး' ဆိုသော အသံသည် ရခိုင်စကားသံအားဖြင့် 'ခွီး' ဟု အသံထွက်ပါသည်။
မြန်မာဘာသာစကားတွင် အသုံးမူကွဲ နှစ်မျိုးရှိသောကြောင့် စုံတွဲဘာသာစကား(Diglossia) ဖြစ်သည်။
စာပေဟန် - အမြင့်(မြန်မာစာ) → စာကြီးပေကြီးရေးသားခြင်း၊ သတင်းစာများ၊ အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာ ရုံးစာများ၊ ရုပ်သံ ရေဒီယို သတင်းကြေငြာခြင်း၊ မိန့်ခွန်းပြောခြင်း စသည်တို့တွင် သုံးနှုန်းသည့် ပုံစံ ဖြစ်သည်။
စကားပြောဟန် - အနိမ့် (မြန်မာစကား) → နေ့စဉ်သုံး စကားပြောဆိုသောပုံစံ၊ သာမာန်ရုပ်သံအစီအစဉ်များ၊ ကာတွန်း/ဝတ္ထုများ စသည်တို့တွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောဆိုနေကြသည့် ပုံစံ ဖြစ်သည်။
မြန်မာ စာပေပုံစံသည် သာမာန်အားဖြင့် အသုံးမရှိတော့သည့် ရှေးရိုးဆန်သော သဒ္ဒါဆိုင်ရာ စကားလုံးများ(ဥပမာ - ပစ္စည်း၊ဝိဘတ်၊ နာမ်စား၊ သမ္ဗန္ဓ )ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသုံးစွဲလျှက်ရှိသည်။ အများအားဖြင့် အရေးပုံစံတွင် သုံးနှုန်းနေသော သဒ္ဒါဆိုင်ရာ စာကားလုံး တို့သည် မြန်မာစကားပြောပုံစံတွင်ရှိသော သဒ္ဒါဆိုင်ရာ စာကားလုံးတို့ဖြင့် လုံးဝ ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ဥပမာ -
နာမ်စား - (မြန်မာစာ အသုံး) ဤ → (မြန်မာစကား အသုံး) ဒီ
နာမ်စား - (မြန်မာစာ အသုံး) ထို → (မြန်မာစကား အသုံး) ဟို
ဝိဘတ် - (မြန်မာစာ အသုံး) ၌ → (မြန်မာစကား အသုံး) မှာ
ပစ္စည်း - (မြန်မာစာ အသုံး) များ → (မြန်မာစကား အသုံး) တွေ
ပစ္စည်း - (မြန်မာစာ အသုံး) ၏ → (မြန်မာစကား အသုံး) ရဲ့
သမ္ဗန္ဒ - (မြန်မာစာ အသုံး) နှင့် → (မြန်မာစကား အသုံး) နဲ့
သမ္ဗန္ဒ - (မြန်မာစာ အသုံး) လျှင် → (မြန်မာစကား အသုံး) ရင်
အပြောစကားမှ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှု အဆင့်အလိုက် စကားလုံးသတ်မှတ်ချက်များနှင့် စကားပြောသူတွေရဲ့ အသက်အရွယ်၊ ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု စသည့် အနေအထားအရ အရိုအသေပြု ခေါ်ဝေါ်ရတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ရှိသည်။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုကို ပြသရန်အတွက် 'ပါတယ်'၊ 'ပါခင်ဗျ' စသည့် ဝိဘတ် များကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ နာမ်စားတွေမှာလည်း အသုံးပုံစံ အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဆရာ/ဆရာမ၊ အရာရှိ၊ အသက်ကြီးသူ စသည့်သူများအား ခေါ်ဝေါ်ရန်အတွက် ယဉ်ကျေးတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းပုံစံတွေ သတ်မှတ်ထားရှိသည်။ ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုရေးသားတဲ့ အသုံးအနှုန်းများသည်လည်း သာမာန် နေ့စဉ်သုံး စကားပြော အသုံးအနှုန်းများဖြင့် များစွာ ကွာခြားသည်။
In many Burmese words, ဓနိတနှင့် သိထိလအက္ခရာ indicate active or passive voice in verbs. Examples include the verb "cook," where the aspirated version ချက်‌ ([ʧʰeʔ]) means "cook," while the unaspirated ကျက်([ʧeʔ]) means "to be cooked." Another example is "lessen," where the aspirated version ဖြေ ([pʰjè]) means "lessen" while the unaspirated version ပြေ ([pjè]) means "to lessen."
နိမ့်သံ à Normal phonation, medium duration, low intensity, low (often slightly rising) pitch
တက်သံ á Sometimes slightly breathy, relatively long, high intensity, high pitch; often withafall beforeapause
သက်သံ a̰ tense or creaky phonation (sometimes with lax glottal stop), medium duration, high intensity, high (often slightly falling) pitch
တိုင်သံ aʔ Centralized vowel quality, final glottal stop, short duration, high pitch (in citation; can vary in context)
တိုက်ရိုက်မွေးစားခြင်း - ပါဠိစကားလုံးအား မူရင်း ပါဠိအတိုင်း ယူသုံးသည်
ပါဠိဘာသာစကားဖြင့် 'ဒေါသ' → မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် 'ဒေါသ'
ပါဠိဘာသာစကားဖြင့် 'လောဘ' → မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် 'လောဘ'
အတိုကောက်မွေးစားခြင်း - ပါဠိစကားလုံးအား အတိုချုံ့၍ ယူသုံးသည်
ပါဠိဘာသာစကားဖြင့် 'ကမ္မ' → မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် 'ကံ'
ပါဠိဘာသာစကားဖြင့် 'အရုဏ' → မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် 'အာရုဏ်'
ပါဠိဘာသာစကားဖြင့် 'ကုသလ' → မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် 'ကုသိုလ်'
နှစ်ခါမွေးစားခြင်း - မူရင်းပါဠိစကားလုံးအား မတူညီတဲ့ မြန်မာစကားလုံးနှစ်မျိုးအတွက် ယူသုံးသည်
ပါဠိဘာသာစကားဖြင့် 'မာန' → မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် 'မာန' နှင့် 'မာန်'
ပေါင်းစပ်မွေးစားခြင်း - မြန်မာစကားလုံးနှင့် ပါဠိစကားလုံးများအား ရောစပ်၍ စကားလုံးအသစ် တီထွင် အသုံးပြုသည်
လေယာဉ်ပျံ - လေ←(မြန်မာစကားလုံး) + ယာဉ်←(ပါဠိစကားလုံး) + ပျံ←(မြန်မာစကားလုံး)
ဒုက္ခ ([doʔkʰa̰]) - ပါဠိ "dukkha"
ရေဒီယို ([rèdìjò]) - အင်္ဂလိပ် "radio"
စနစ် ([səniʔ]) - မွန် "စ္နတ်‌"
ကော်ပြန့် ([kɔ̀pja̰n]) - အင်္ကျီတို (ဖူကျန့်) တရုတ် 潤餅 (jūn-piáⁿ)
ဇနီး ([zəní]) - ဟိန္ဒီ पत्नी (jani)
ခေါက်ဆွဲ ([kʰaʊʔ sʰwé]) - ရှမ်း "ၶဝ်ႈသွႆး"
ပေ ([pè]) - ပေါ်တူဂယ် pé
အလံ ([əlàn]) - အာရပ် alam
↑ (2013) "Southern Burmish", Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
Becker, Alton L. (1984). "Biography ofasentence: A Burmese proverb.", in In E. M. Bruner (ed.): Text, play, and story: The construction and reconstruction of self and society. Washington, D.C.: American Ethnological Society, 135–55.
Green, Antony D. (2005). "Word, foot, and syllable structure in Burmese.", in In J. Watkins (ed.): Studies in Burmese linguistics. Canberra: Pacific Linguistics, 1–25. ISBN 0-85883-559-2.
Wheatley, Julian K. (1987). "Burmese.", in In B. Comrie (ed.): Handbook of the world's major languages. Oxford: Oxford University Press, 834–54. ISBN 0-19-520521-9.
(1989) in Patricia M Herbert, Anthony Milner: South East Asia Languages and Literatures: Languages and Literatures: A Select Guide. University of Hawaii Press. ISBN 0-8248-1267-0.
ရခိုင်ဘာသာစကား (ရမ်းဗြဲ၊ Sandoway)
"https://my.bywiki.com/w/index.php?title=မြန်မာဘာသာစကား&oldid=402600" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ မေ ၂၀၁၈၊ ၁၄:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။